Iyo Verdun FPS yemahara kwenguva shoma | Ndinobva mac
Iyo Verdun FPS yemahara kwenguva pfupi
Ignacio Sala | 26/07/2021 16:00 | Mitambo
Imwezve vhiki, isu tinofanirwa kutaura nezve musoro wenyaya watinogona kurodha mahara kwenguva yakati rebei kuburikidza neEpic Games Chitoro. Tiri kutaura nezvazvo Verdun wekutanga munhu shooter mutambo, mutambo unobva paKutanga Hondo Yenyika, kunyanya muna 1916.
Kana iwe uchiziva diki nhoroondo, iwe unozoziva kuti iyo hondo yeverdun Yaive yakareba kwazvo muHondo Yenyika Yekutanga, yakarwa pakati paKukadzi naZvita 1916 pakati pemauto eGerman nemaFrance mumakomo eVerdun-sur-Meuse kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweFrance.
Kana iwe uchida kutora mukana weichi chipo, unofanirwa pamberi paJuly 29 na17: XNUMX p.m., Spanish nguva. Mukutsanangurwa kwemutambo, tinogona kuverenga:
Verdun ndiye wekutanga multiplayer wekutanga-munhu shooter mutambo chaizvo wakaiswa muHondo Yenyika I, uye yekutanga chikamu muWWI Game Series. Iyo ine hutsinye yakavharirwa nzvimbo yemugero wehondo inoita kuti bayonet dexterity ive yakakosha sekumakisa nepfuti.
Ziva mutambo wemutambo weHondo Yenyika I: arsenal yakasimba, magasi ane chepfu ane claustrophobic gasi mask, zvinotyisa zvine ropa zvine mhedzisiro uye anotyisa artillery volleys.
Tactical mutambo wemunhu wekutanga kupfura ne squads: 15 akasiyana squads ane varwi vanobva kunopfuura nyika shanu, imwe neimwe iine zvombo zvakasiyana nemidziyo.
Yechokwadi Trench Hondo - Yechokwadi-nguva ine simba pamberi nekufamba-kwakavakirwa kurwisa uye kupikisa Gameplay.
Marongero echokwadi eiyo Hondo Yenyika Yekutanga: mimhanzi uye aesthetics zvakajairika zveGreat War nenzvimbo dzehondo dzezvakaitika zvine nzvimbo huru dzemitambo dzekushandira kuWestern Front.
WWI Verdun Western Mberi Iine mutengo wenguva dzose muEpic Games Chitoro che17,90 euros.
Verdun zvishoma zvinodiwa
Inoshanda system: macOS 10.11 kana kumusoro
Processor: Intel 5 GHz Core i2500-3,3K CPU, AMD Phenom II X4 940 CPU
Ndangariro: 4 GB ye RAM - 8 GB yakakurudzirwa.
Kuchengetedza: 12 GB
Graphics: ingangoita 1 GB yekurangarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mitambo » Iyo Verdun FPS yemahara kwenguva pfupi
David S. Goyer, musiki weFundación akateedzana, anotsigira kuti akateedzana anga ari dambudziko
Iyo yakanakisa ye 'Central Park' inoonekwa pane iyo Comic-Con pani